Maninona no mandeha miaraka amin'ny mpanome tolotra fampiharana? | Martech Zone
Fanamby iray ny miresaka amin'ny orinasa manana loharanom-bola matanjaka amin'ny informatika ary asaivo mividy modely ASP izy ireo. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny maha samy hafa ny ASP sy ny lozisialy lova dia ny famoahana rindrambaiko ho an'ny client ary ny iray hafa dia mamoaka amin'ny Internet izay mora hitazomana ilay fampiharana.
Raha mijery ny indostria amin'ity fomba ity izy roa dia mitovy amin'ny orinasan-rindrambaiko. Tena tsy lavitra ny marina izany - saingy sarotra ny manazava izany amin'ny matihanina amin'ny IT izay tsy te hamela fifehezana na amin'iza na amin'iza - na inona na inona fahaizan'izy ireo.
Inona no atao hoe ASP?
Orinasa rindrambaiko mamorona vahaolana rindrambaiko. Ireo mpamatsy tolotra fampiharana dia mpiray antoka amin'ny orinasa izay mampiasa vahaolana amin'ny lozisialy. Mpivarotra lozisialy iray dia azo ianteherana amin'ny fanohanana bibikely sy endrika vaovao; amin'ny maha ASP azy dia azo ianteherana hahazoana ny indostria, ny fironana, ny fitantanana ny fahombiazan'ny mpanjifa sy ny fitomboany, ary manohy manosika ny famoahana na dia mitazona fotoana fohy aza.
Aza diso ny fampiharana an-tranonkala ho an'ny ASP, samy hafa be izy roa. Gmail dia fampiharana an-tranonkala. Google Office dia fampiharana miorina amin'ny tranokala. Sady tsy manome 'serivisy' ho an'ny mpanjifa ivelan'ny fampiasana ny rindrambaiko. Ny ASP dia manome fotodrafitrasa, serivisy, rindrambaiko ary fanohanana.
Soa ihany, misy olona atao hoe ASP marina - Fampiharana Service Provider. Ny ASP dia tsy lafatra ho an'ny indostria rehetra na ho an'ny olan'ny rindrambaiko rehetra. Betsaka ny rindranasa rindrambaiko izay miasa tsara kokoa eo an-toerana noho ny outsourcing amin'ny tranonkala. Ny rindranasa izay mitaky angon-drakitra avo lenta hafindra eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpizara dia ohatra iray - ny bandwidth dia mety ho bottleneck.
Ireo mpamatsy tolotra fampiharana dia manome anao mpiasa ivelany izay manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny asany. Fantatry ny ASP ny fomba fampidiran'ny rindrambaiko tsara ao anatin'ny tontolon'ny orinasanao sy manampy amin'ny fitarihana ny valin'ny asa ataonao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rindrambaiko.
Ohatra iray ASP: Mpanome tolotra mailaka
Ohatra tsara amin'ny ASP ny Mpanome tolotra mailaka. Orinasa iray, toa ExactTarget, manana loharanon-karena indostrialy mahafinaritra:
Ekipa mpanafaka izay miara-miasa amin'ireo Mpamatsy Aterineto mba hiantohana ny mailaka tsy ho fantatrao hoe SPAM ary hiditra ao anaty lisitra mainty ianao.
Ekipa fitantanana vokatra izay manara-maso ny fironana amin'ny indostria ary miantoka fa mamorona mailaka hitan'ny ankamaroan'ny mpanjifa mailaka ny rindrambaiko.
Ekipa fitantanana kaonty izay afaka manampy anao amin'ny famoronana mailaka, fanoratana, ary serivisy stratejika hafa mba hampitomboana ny valiny.
Ekipa fampiraisana izay miasa miaraka amin'ireo orinasa eran'izao tontolo izao amin'ny fampiharana sy sehatra samihafa. Manome traikefa izy ireo mba hampivelarana tsara ny fampidirana voalohany.
Fampivoarana ny fampiharana izay manohana ny fenitra avo lenta amin'ny fampandrosoana ary mampiasa teknolojia sy fotodrafitrasa faratampony.
Ohatra iray hafa: Famandrihana an-tserasera
Ao amin'ny indostrian'ny trano fisakafoanana, misy olona marobe mivarotra rindrambaiko Fandefasana an-tserasera. Manana ny paradigma mitovy amin'ny olona IT isika hamakivakiana ireo ASP mahazatra, ny ankamaroan'ny ekipa IT mahay sy za-draharaha izay mino fa afaka mampihatra rindrambaiko eto an-tany. Tsy manana fisalasalana aho fa afaka izy ireo - fa ny fahaizany matetika dia manomboka ary mijanona eo amin'ny toerana misy ny rindrambaiko manomboka sy mifarana.
Ny olana amin'ireo mpivarotra an-tserasera momba ny fisakafoanana ao amin'ny Trano fisakafoanana dia ny vitsy amin'izy ireo no mijery any ankoatry ny indostria… Namaha olana momba ny fomba hahatongavana amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B izy ireo ary nanidy varavarana. Mahazo baiko amin'ny Internet a pos no ampahany mora. Raha vantany vao afaka manao izany ianao dia 'manao raharaham-barotra'. Ny ampahany sarotra, araho kosa:
Famakafakana ny fampiasana ny fampiharana, ny fifandrindrana, ny fampiasa ary ny fanamafisana ny fampifanarahan'ny mpampiasa mba hampiakarana ny fiakarana ary hampihenana ny tahan'ny fandaozana.
Manome fiakarana ho an'ny baiko izay diso noho ny fahatapahana, ny olan'ny POS, ny olana amin'ny menio, ny olana amin'ny fifandraisana, ny olana amin'ny fandoavam-bola, sns.
Ny fanaraha-maso ny fironana amin'ny indostria hanomezana teknolojia mety sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny fananganana vaovao sy fanarahan-dalàna dia ilaina. Vaovao lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria izao ny fandefasana finday. Firy aminareo no nanafatra pizza tamin'ny SMS? Eny, nieritreritra izany aho.
Fampidirana ho Analytics, rafitra fitantanana atiny, doka isaky ny tsindry, marketing amin'ny mailaka ary fitaovana marketing hafa dia tena ilaina amin'ny sehatra ecommerce rehetra. Moa ve ny 'rindrambaiko' ataonao ho anao? Tsia. Fa ny ASP anao dia tokony ho.
Ny ASP dia takiana amin'ny fanatsarana sy fampiasam-bola
Ny ASP dia manodidina ny tenany miaraka amin'ny talenta tsara indrindra eny an-tsena, ary izy ireo dia nanangana rindranasa izay mampiasa ny fotodrafitrasa sy ny serivisy mba hanomezana vokatra tsara indrindra. Ny ASP dia mailaka ary ny fahombiazany dia mifamatotra mivantana amin'ny fahombiazan'ny orinasanao.
Ny tombony farany farany amin'ny ASP, mazava ho azy, dia ny fomba fiasa amin'ny rindrambaiko. Matetika ny ASP dia manome maodely famandrihana izay manome modely momba ny fahazoan-dàlana ireo mpamatsy rindrambaiko. Inona no mahasamihafa azy? Mividy ilay rindrambaiko ianao ary mampandeha azy. Raha tsy mandeha izy dia miankina amin'ny fikambanananao ny mampandeha azy. Mirary anao ho tsara vintana! Amin'ny ASP dia matetika no mihazakazaka ny rindrambaiko ary mandoa ny fampiasana azy.
ASPs Omeo ny Client Leverage fa tsy ny Application
Raha ny fijerin'ny orinasa dia manome orinasa manana tombony bebe kokoa mihoatra ny mpamatsy serivisy fampiharana ity fa tsy ny orinasan-rindrambaiko. Izany dia manery ny ASP hampiasa vola amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny teknolojia izay porofo feno. Ny angano misy ASP dia ny tombony azony kokoa. Rehefa niara-niasa tamin'ny ASP tena lehibe aho dia afaka manome toky anao fa ny tombom-barotra dia mifanitsy amin'ny indostrian'ny rindrambaiko.
Tags: chad pollittchadpollittFacebook Timelinegotowebinarboky marketing miditraIsakakuno mamoronastatistika mailaka findayreadytalksalesforce
Inona no novakin'ny milina fikarohana…
Mbola milay ihany ny mahazo pirinty!